Jayamangala Buddhist Vihara (Sg)
မိဘများဖြစ်ကြသော ဦးညီတင်ထွန်း၊+ဒေါ်စောခင်ကြည်။ ဦကျော်ဆန်း+ဒေါ်ရွှေကျော့နု တို့ကိုအမှူး ထားပြီး။ ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည် သံသရာဝဋ် ဆင်းရဲမှလွတ် မြောက် လျှက်, မအိုမသ အမြဲနေရာ ဖြစ်သော မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို ရည်သန်တောင်းတလျှက်, ကုသိုလ်ပါရမီ အထောက် အပံ့ဖြစ်ပါစေရန် လည်းကောင်း၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ၌ မိုးကုတ် ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဥပနိဿယ အတိုင်းဝိဿနာ တရားတော် စည်ပင်ပြန့် ပွားရေးအတွက် တက်ကြွစွာသာသနာပြုလျှက်ရှိသော ဇယမင်္ဂ လာဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ (စင်္ကာပူ)၊ ဇယမင်္ဂလာ ဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ(မလေးရှား)၊ ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ (မြန်မာပြည်)တို့၏နာယကချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်ဝိစိတ္တ(ဓမ္မာစရိယ၊B.A,M.A,M.A,Ph.D)စာပေပါရဂူ အားသာသနာတော် အကျုိုး ဆထက်တပိုးသယ်ပိုးနိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ရည်သန်လျှက်တပည့်တော်တို့သည်စင်္ကာပူနိုင်ငံ၌
သိက္ခာထပ်မင်္ဂလာပွဲကို ဆင်ယင်ကျင်းပကာ သံဃာတော်အရှင် သူမြတ်တို့အား လှူဒါန်း ဖွယ်ရာ အဖြာဖြာတို့ဖြင့် လှူဒါန်းပူဇော်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဆွေတော် မျိုးတော် အပေါင်း တို့အား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် = = ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၂ ခုနှစ်၊ တန်းဆောင်မုန်းလဆန်း(၈)ရက်၊
(14 .11.2010, Sunday)။
အချိန် = = နံနက် (၁၀)နာရီ။
နေရာ = = Jayamangala Buddhist Vihara,
23A Jalan Mas Puteh, Along West Coast Road,
မခင်ဥမ္မာ။& ၊မရတနာနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊
ရတနာ နှင့် ခင်ဥမ္မာ
Posted by Clementi Holy Temple at 9:34 AM
အရဟံ ဗဟိအန္တဇယံ သုဂတံ၊ အမိတံ ၀ိရဇံ လလိတံ အတုလံ။ စရဏံ တိဘ၀ူပသမံ ယမကံ၊ သုခဒံ သရဏံ ပဏမာမိ ဇိနံ။ အရဟံ - ပူဇော်အထူးကို ခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ ဗဟိအန္တဇယံ - အတွင်းအ ပရန်ကို အောင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ- ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ သုဂတံ - ကောင်းသော စကားကို ဟောပြောတတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ အမိတံ - မနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့် တန်ခိုးပြာဋိဟာရှိသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ- ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ ၀ိရဇံ - ကိလေသာမြူ ကင်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရာားကို၊ ပဏမာမိ - ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ လလိတံ - တင့်တယ် သပ္ပါယ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ-ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ အတုလံ - အတုမရှိသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ- ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ စရဏံ - အကျင့်စရဏနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ တိဘ၀ူပသမံ - ဘ၀သုံးပါး၌ ကိလေသာငြိမ်းအေးသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ- ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ ယမကံ - ရေမီးအစုံစုံသော တန်ခိုးပြာဋိဟာနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ သုခဒံ - ချမ်းသာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ သရဏံ - ကိုးကွယ်အားထား ရာဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ - ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။ ဇိနံ - မာရ်ငါးပါးကို အောင်မြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို၊ ပဏမာမိ- ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။
ဇယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓ၀ိဟာရ. Simple theme. Powered by Blogger.